Faallooyinka – Page 22
Daawo:- Hooyooyinka Dhalay Caruurta agoonta ee boliska Somaliyeed oo maanta banaanbax ka hor dhigay Villa Somalia.
March 30, 2019 Xafiiska Puntland 2
Qaar kamid ah Hooyooyinka dhalay Carruurta ay ka geeriyoodayn Ciidamada Booliiska Soomaaliya kuwaas oo loo yaqaano, Carruurta agoonta Booliiska, ayaa maanta banaanbax ka dhigay Madaxtooyada Soomaaliya horteeda. Waalidiintaan ayaa ka cabanyay in aysan dhowr bilood
Akhriso:- Isbadal lagu sameeyay hogaanka ciidanka xooga dalka Somaliyeed iyadoona la magacaabay ciidanka Lugta Somalia.
Waxaa Isbadal xoog leh lagu sameeyay Taliska Ciidamada difaaca Soomaaliya kadib wareegto ka soo baxday Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo Isbadalkaan ayaa lagu sameeyay qayba kamid ah hogaanka Ciidanka Xoogga dalka waxaana sababta lagu sheegay
Daawo Degdeg:- Muuse Biixi oo xilalkii ka xayuubiyay wasiiro ay kamid yihiin Guribarwaaqo iyo kan Gaashaandhiga.
March 30, 2019 Xafiiska Puntland 1
Madaxweynaha Maamulka Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa sameeyay Isku-shaandheyn & Xilka qaadis Balaaran. Masuuliyiinta Xilalka laga qaaday ayaa kala ah. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Diiriye (Guri Barwaaqo) Wasiirkii Warfaafinta, Wacyigelinta iyo Dhaqanka Ciise Axmed Yuusuf Cabdalle
Daawo:- Xildhibaan Jeesoow oo dhaar ku maray inuu horkacayo mooshin ka dhan ah xukuumadda Kheyre waa haddii Wasiirada…
March 30, 2019 Xafiiska Puntland 5
Xildhibaan Daahir Aamin Jeesow oo ka mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacabka ayaa digniin adag u diray Golaha Wasiiradda Xukuumadda Soomaaliya qaarkooda xildhibaanada ah oo uu sheegay in ay dhibaato ku hayaan Kulamada Golaha Shacabka. Xildhibaan
Daawo Degdeg:- Xildhibaan “Baaqashada kulanka maanta waxaa ka dambeeyay Xassan Cali Kheyre waayo wasiirada ma aysan soo xaadirin”.
Kulankii lagu balansanaa ee baarlamaanka Somalia ayaa maanta dib udhacay kadib markii sida gudoonka uu sheegay uu buuxsami waayay kooramdkii uu kulanka ku furmi lahaa. Xildhibaanada xaadiray kulankii maanta ayaa waxay aaminsan yihiin qaarkood in
Deg-deg:- Xildhibaan Fiqi iyo kooxdiisa oo maanta Qaylo ku burburiyay Kulankii baarlamaanku ku balansanaa xaruntooda.
March 30, 2019 Xafiiska Puntland 7
Waxaa Maanta lagu waday in uu si rasmi ah u furmo Kal-fadhiga 5-aad ee Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii Arbacadii la soo dhaafay uu furay Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Guddoomiyaha Golaha Shacabka
DAAWO VIDEO:Wararkii Ugu Danbeeyey Xiisad dagaal Soomaliland Iyo puntland Sanaag.
March 30, 2019 marqaan 10
Wararka Aanu ka Helayno Gobolka Sanaag Ayaa Sheegaya Inay Ciidamada Daraawishta Puntland saacadaha Ugu danbeeyey Gaadheen Gobolka sanaag Qeybo ka mida oo Soomaliland ku Sugnaayeen markii Hore. Ciidamadani oo ku Hubaysan hubka Noociisa Kala Duwan
DAAWO VIDEO:Qosol Nasteexo Indho Iyo Sheeko Qosol leh Nin Reer Galkacayo
March 30, 2019 marqaan 0
Daawo:- Siyaasi sheegay inuusan waligii diyaar u ahayn inuu la shaqeeyo MD Biixi “Xil walbo uu ii magacaabo uma baahni”.
March 29, 2019 Xafiiska Puntland 2
Siyaasi Maxamuu Xaashi oo mar soo noqday wasiir somaliland ah ayaa si cad usheegay inuusan damac ugu jirin qabashada xil isagoona sheegay inuusan diyaar u ahayn la shaqeynta Muuse Biixi Cabdi. Siyaasiga waxa uu sheegay
Daawo:- Boliska Puntland oo dhaliil ujeediyay shacabka Boosaaso “Shacaboow idinkaa dhib wada oo run ah”.
March 29, 2019 Xafiiska Puntland 1
Taliyaha ciidanka Boliska Puntland Gen.Muxidiin axmed Muuse oo qaar kamid ah warbaahinta la hadlay ayaa si adag uweeraray shacabka Boosaaso oo uu sheegay in ay sabab u yihiin dayaca amaan ee jira. HALKAAN KADAAWO
Akhriso:- Galmudug oo kadaba hadashay warkii Madaxwayne Farmaajo “Tabasho cusub”.
March 29, 2019 Xafiiska Puntland 0
Hogaanka Maamulka Galmudug ayaa faah faahin ka bixiyay kulamo saacado badan qaatay oo ay la yeeshayn Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, kulamadaas oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. War-saxaafadeed ka
Daawo:- Waa sidee xaaladd gabadha 12jirka ahayd ee lagu kufsaday degmada Buurtinle.
Waa sidee xaaladda Najmo Cabduqaadir Xasan oo ah gabar 12 sano jir ah oo kufsi loogu gaystay degmada Burtinle ee gobolka Nugaal? Najmo ayaa waxaa hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaal Bossaso, inkasta oo dhaqaatiirta
Daawo:- Wasiir Galan “Sargaalkii ciidankiisa dhib gaystaan isagaa xabsiga liinta ku cabi doona”.
March 28, 2019 Xafiiska Puntland 3
Wasiirka oo ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen laamaha amaanka Puntland, wasiiro,maamulka gobolka iyo kan degmada Boosaaso iyo qaar kamid ah waxgaradka gobolka Bari kaas oo ujeedkiisu uu ahaa sida looga wada shaqeyn karo sugidda
Daawo:- Axmed Karaash oo markii ugu horreysay shir gudoomiyay kulanka Wasiirada + Qodobo xasaasi ah.
March 28, 2019 Xafiiska Puntland 4
Shirka khamiislaha ee golaha xukuumadda dowladda Puntland oo maanta ka qabsoomay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa looga hadlay arimo ay kamid yihiin amniga,dhismaha golayaasha deegaanka iyo abaaraha. Shirka oo uu shir gudoominayay madaxweyne ku